Ndị Amọbịa Etoola Obianọ Maka Ịrụrụ Ha Ụzọ
Ndị ogbe Ụmụeze n'Amọbịa etoola aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ maka ịrụrụ ha ụzọ ahụ jikọrọ ha na Obinagụ n'Ọka. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu banyere nke ahụ, otu onye nkụzi bi na mpaghara ahụ, bụ maazị Akụm Obi kọwara nke ahụ dịka nke bịara n'oge a tụrụ anya ya, ma tokwa gọvanọ Willie Obianọ maka imezu nkwa o kwere ha. O kwuru na ndị Amọbịa eritela ọtụtụ uru n'ọchịchị gọvanọ Obianọ, ma rịọ ya ka ọ gaa n'ihu n'ọrụ ọma ahụ, ọbụnadị dịka ha kwere nkwa inye ọchịchị ya nkwado zuru okè.
N'akụkụ nke ya, otu onye na-azụ ahịa ma bụrụkwa onye bi na mpaghara ahụ, bụ oriakụ Chinwe Okoli kwuru na ụzọ ahụ bụ nke nọ n'ajọ ọnọdụ wee ruo mgbe gọvanọ Obianọ gbatara ọsọ enyemaka, ma kọwaa ya dịka gọvanọ na-arụ ọrụ na onye nwere mmetụta banyere ọnọdụ ụmụ mmadụ n'obi.
N'akụkọ dịkwa ka ibe ya, ọrụ amalitekwala n'uju n'okporo ụzọ Esther Obiakọ dị n'Ifite Awka bụ isi obodo steeti ahụ, ma bụrụkwa nke a ga-akapịa ọnụ tupuu ọnwa Ekeresimeesi ahọ a.
Ya bụ ọrụ ngo, nke ụlọ ọrụ Sage Nig. Ltd nọ n'isi ya, bụ nke dị mita asaa na ụma atọ n'akụkụ abụọ, ma bụrụkwa nọ n'ajọ ọnọdụ kemgbe wee ruo mgbe gọvanọ batara n'ọkwa ọchịchị, dịka o siri mee n'ebe ndị ọzọ dị iche iche e nwere nsogbu ụzọ na steeti ahụ.
N'okwu nke ya, otu onye bi na mpaghara ahụ, bụ maazị Emma Agidi kwuru na gọvanọ Obianọ na-arụsi ọrụ ike ma na-arụpụtakwa ihe a hụrụ anya. Ọ kpọkwazịrị oku ka a gbaa mbọ hụ na a rụchapụrụ ya bụ ọrụ n'oge ma ọ bụ tupuu mgbe a kara aka.
Onye ọzọ, maazị Kingsley Afọ kọwara ọrụ ụzọ ahụ dịka nke bịara na mgbe a tụrụ anya ya, ma sị na nke ahụ ga-eme ka a kwụsị inwe oke npakọsị ụgbọala n'Ifite.